3 Isbeddellada Teknolojiyada ee ay tahay inay suuqyadu daawadaan 2015 | Martech Zone
Arbacada, Janaayo 7, 2015 Talaado, Janaayo 6, 2015 Douglas Karr
Xogta ayaa ka socota macaamiishaada hada… taleefannadooda, barnaamijyadooda bulshada, miisaska shaqadooda, kiniiniyadooda, iyo xitaa gawaaridooda. Hoos uma dhacayso. Waxaan dhowaanahan booqanayey guriga qoyskeenna ee ku yaal Florida halkaas oo aan casriyaynay nidaamka digniinta guriga.
Qaylo-dhaamiyaha wuxuu ku xiran yahay internetka oo haddii Internet-ka uu xiran yahay, wuxuu ku xirayaa khadka wireless-ka ee gudaha ah (iyo batteriga haddii korontada lumo) Nidaamka waxaa loo qorsheeyay in lagu ogaado laguna dhawaaqo albaab kasta, daaqad ama xitaa haddii albaabka garaashka uu furan yahay. Waxaan sidoo kale ka xakameyn karnaa dhammaan taleefannada casriga ah.
Kaamirooyinka waxay ku xiran yihiin khadka tooska ah ee loo yaqaan 'DVR' iyo barnaamijka moobiilka oo aan fiirin karo maalin ama habeen. Laga soo bilaabo Indiana, waad u lugeyn kartaa guriga, waanan ku arki karaa adiga oo dami alaamka ama albaabka ka fura Indiana. Garaashka waxaa ku dhex yaal Ford cusub oo leh nidaam loo yaqaan 'Sync system', oo cilaaqaadka ula xiriiraya ganacsadaha kuna xirnaanaya aruurinta muusigga hooyaday iyo liiska xiriirka.
Hooyaday xitaa waxay ku leedahay laabta defibrillator iyo idaacad ay u soo dhaafto taas oo u gudbisa dhammaan xogteeda dhakhtarkeda si ay dib ugu eegto. Sida aan u daawanayay iyada oo sidaas samaynaysa, waxaan aad uga baqay tirada qalabka horeyba ugu xirnaa oo u waday megabyte xog maalin kasta guriga gudihiisa… iyadoo aan qofna xitaa kumbuyuutarka ku jirin.
Maxay uga dhigan tahay suuqleyda, in kastoo? Waxay ka dhigan tahay suuq kasta oo u baahan ku dhaji xogta weyn, u adeegso si wax ku ool ah, oo u dir ololeyaal shakhsi ahaaneed isla markiiba si loo kordhiyo qiimaha ay ku leeyihiin rajadooda iyo macaamiishooda. Adduunkan cusub ee isku xidhan wax waa udub dhexaadka Google ee ugu dambeeyay ee ku saabsan saddexda isbeddel ee teknolojiyadeed ee suuqleydu u baahan yihiin inay daawadaan sanadka 2015.
From Ka Fakar Google
Bilowga sannad kasta, kulligeen waxaan isku dayeynaa inaan saadaalino waxa soo socda. Waa maxay isbeddellada qaabayn doona warshadaha? Tikniyoolajiyadee dadku aqbali doonaan? In kasta oo aynaan haysan kubbadaha loo yaqaan 'crystal balls', haddana waxaan haynaa xog raadin. Iyo sida uruurinta ujeedooyinka macaamiisha, waxay noqon kartaa bellwether weyn oo isbeddellada ah. Waxaan eegnay raadinta Google oo waxaan ka qodnay cilmi baarista warshadaha si aan u aragno waxa dhab ahaan u qabsanaya.
Meelo nololeed oo isku xidhan ayaa soo ifbaxaya - Internetka Waxyaabaha ayaa si rasmi ah wax u ah. Maaddaama aaladuhu sii kordhayaan oo ay bilaabayaan inay wada shaqeeyaan, walxaha isku xiran waxay u noqon doonaan meherado noloshaada. Waxay kaa caawin doonaan waxyaabaha aad maalin kasta qabato - laga bilaabo madaddaalada ilaa wadista ilaa daryeelka gurigaaga.
Mobilada ayaa qaabeeya Internetka aniga - Taleefankaaga casriga ahi wuu sii xariif noqonayaa. Sida xarun dhammaan barnaamijyadan isku xiran, waxay u adeegsan kartaa xog fara badan si loo abuuro waayo-aragnimo wanaagsan oo shaqsiyeed. The Internet of Waxyaabaha noqosho ah Internetka aniga - dhamaantood si loo fududeeyo noloshaada.
Xawaaraha nolosha ayaa xitaa sii dheereeya - Qadka ama banaanka, waxaan hadda ku heli karnaa macluumaad, madadaalo, iyo adeegyo waqtiga saxda ah ee aan dooneyno iyaga. Daqiiqadahaan deg degga ah ee go'aan qaadashada waxay u dhacaan si isdaba joog ah - iyo inbadan oo aan xiriir la leenahay, ayey sii badan doonaan.
Tags: 2015internet ee waxisbeddellada tikniyoolajiyaddakula fikir Google
Feb 1, 2015 markay ahayd 7:24 PM
Aragti xeel dheer iyo isbeddellada tikniyoolajiyadda mustaqbalka. Waxaan ku raacsanahay in mobilada iyo internetka waxyaabaha ay yihiin laba xaqiiqo oo waa weyn oo aan dhamaanteen u baahanahay inaan ku qabsano maanta dunida casriga ah. Haa haa xawaaraha nolosha ayaa hubaal ka dhaqso badan sidii hore. Dhammaanteen waxaan dooneynaa macluumaadka loo baahan yahay waqtiga ku habboon… inta badanna waan helnaa.
Aniga ahaan, taleefannada casriga ah iyo xarafyada ayaa ah ciyaartooyda muhiimka ah… qof walbana wuxuu heystaa xisaabtiisa buuxda (ish) ee calaacasha timihiisa sanado yar gudahood…